Gugulu n’agha n’eme ka Web nka Ka nma? | Martech Zone
Satọdee, Nọvemba 14, 2009 Fraịdee, June 19, 2015 Douglas Karr
Nwa oge gara aga, Google tinyere ntinye aka na nyocha ngalaba ndebanye aha dị ka akụkụ nke ikike saịtị. Ihe si na ya pụta bụ na ebe niile na ụlọ ọrụ SEO malitere inye ndị ahịa ndụmọdụ ka ha debanye aha ngalaba ha maka oge kachasị. M ọbụna dere banyere ya na nso nso a .. ma wughachi ya site na ezigbo enyi PJ Hinton si Compendium Blogware (lee ihe).
Ugbu a, Google na - aga n’ihu n’ihu - na - Matt Cutts idobe ndumodu na Google nwere ike ahu nagide page ibu ugboro dị ka ihe na ogo saịtị. Ọ bụ ezie na nke a na-ada ụda ma na-ekpo ọkụ, ọ na-echegbu m n'eziokwu. Nke a ọ pụtara na naanị saịtị nwere obere akpa ga-enwe ike ịkwado nke ọma na ndeksi Google?
Nke a bụ ụzọ Google si egbochi net Nnọpụiche? Ka ọ bụ naanị ịnwa ịchekwa ego? Chegodi ego di na ulo oru dika Google mgbe ndi ozo ha nwere ike igwusi saiti na obere oge o na ewe now ugbua… onu ogugu.
Yabụ, dịka otu n'ime ụlọ ọrụ ndị ọgaranya n'ụwa, Google na-amalite idobe ihe ngosi a. Mee ka saịtị gị ngwa ngwa ma anyị ga - eji ọkwa dị mma kwụọ gị ụgwọ. Nke a dị mma maka ụlọ ọrụ nwere akụrụngwa, ikike na akụrụngwa… mana kedụ ihe na - eme nwata ahụ? Kedu otu obere blog nke anabatara na GoDaddy maka dollar ole na ole na-asọmpi na ụlọ ọrụ a kwadoro na ikpo okwu nke na-efu ọtụtụ puku dollar na ibu ọrụ, caching, osooso weebụ ma ọ bụ teknụzụ igwe ojii?
N'uche m, m chere na ọ dabere na ya ọjọ n'akụkụ. Ka anyị mebie ya:
Weebụ na-aghọwanye ihe mgbagwoju anya.
Nke a choro ka Google kwalite teknụzụ ya.
Nke ahụ na-efu Google ego karịa.
Nke ọzọ bụ ịta ahụhụ saịtị ndị ji nwayọ nwayọ, na-achọ ka ha tinyekwuo ego ma mee ngwa ngwa na saịtị ha, belata ụgwọ Google
Nke ahụ anaghị eme ezigbo PR, n'agbanyeghị.
Kama, Google n’eme ya n’okpuru ịwelite ahụmịhe weebụ.
Ọ bụghị banyere gị na m. Ọ bụ maka usoro Google.
Nke ahụ kwuru, ọsọ saịtị is dị mkpa na Ekwadoro m ka ndị mmadụ melite arụmọrụ saịtị ha iji belata ọnụego bounce ma nwekwuo ntọghata. Mkpebi ahụ dịịrị azụmaahịa gị iji nyochaa ma chọpụta nlọghachi na itinye ego maka.
Mgbe Google bidoro ime nke a, ọ bụghịzị mkpebi nke azụmahịa - ọ bụ azụmaahịa chọrọ ma ọ ga-akụ obere azụmaahịa ọ bụla, agbanyeghị na ọ dị mkpa, na peeji nke nsonaazụ ọchụchọ engine. Ekwetaghị m na ọ dị mma - ọ bụkwa ọrụ nke naanị. Monopolies na-eme mkpebi ndị na-emetụta uru na-enweghị nsonaazụ ebe ọ bụ na enweghị asọmpi.
Google nwere ike chọọ ịkpachara anya na nke a… Bing na-ele anya nke ọma karịa kwa ụbọchị (ma enwere m ya na ya safari!).
Tags: anyaukwu googlegoogle +anyaukwuihu peejiọsọ
Nov 14, 2009 na 7:22 PM
Enwetara m ya.
Nke a na - akwụ ụgwọ m n'ọtụtụ ụzọ:
1. Triples my hosting na-eri.
2. Enwekwu ihe okike m na mmezi mmezi maka ijikwa ibe m
3. Na-abawanye (buru ibu) ọnụ nke agbakwunye ọrụ.
Gbasaa elu. Ọgaranya ga-aba ọgaranya.
Nov 14, 2009 na 7:32 PM
Echefula Dave… mgbe i mechara nke a, i nwere ike ide ihe nzuzu! Agakwaghị na-ga-n'ezie na-arụ ọrụ na-ede mma… dị nnọọ nchegbu banyere ngwa ngwa!
Oh ee… na echegbula banyere ntụgharị, Firefox ma ọ bụ Safari… naanị mee ya ngwa ngwa na Google Chrome, nri?
Nov 15, 2009 na 4:32 AM
Edere ederede Doug. Dika egosiputara ebe a Google gh’abia bido imegide nkwa ‘emela ihe ojo’ karia. Ọ ga-abụ ihe na-akpali ụzọ na-atụ na-etolite ha na m nwere ike ọ gaghị enyere ma na-eche banyere myirịta na Yahoo! Na 2001-3 dịka akara ha malitere na-emebi maka oge mbụ. Legodị ebe ha nọ ugbu a.
Nov 15, 2009 na 12:23 PM
Nke ahụ na-akpali mmụọ. Google malitere site na ịgwa anyị saịtị ndị ejikọtara na ya. Ọ na-adafu ka ọ ghara imebi olu ndị mmadụ kama itinye iwu nke ya. Ha na-ekpebi ihe dịịrị ndị ahịa ha, na-ahapụghị ndị ahịa ikpebiri onwe ha!
Nov 16, 2009 na 5:06 PM
Akpọrọ m asị ịbụ onye aghụghọ, mana mgbe Google na-agbanwekarị, ụwa SE na - enwe nsogbu - "paranoid" n'ụzọ CNN ebe ha na-eme ugwu site na molehill iji nweta elele na ntinye mgbasa ozi. Google adịkarịghị eme ka mgbanwe mgbanwe ziri ezi na-emetụta ọdịdị ala. Ọ na-abụkarị, a na-eji mgbanwe sara mbara eme mgbanwe Google. Ma oburu na mgbanwe mgbanwe a buru ihe di nma, o gha aghaghi idi n'ime otutu otutu ndi mmadu nwere ike idenye aha ha. Echere m na ọbụna ụmụ nwoke nke Mountain View na-echeta òkè ahịa ha ma mara na ọ bụrụ na ha arịọghị ndị mmadụ, ha nwere ike tufuo òkè ha.
E wezụga nke ahụ, ọ dịghị onye kwesịrị iji GoDaddy mee ihe n'ezie ịnabata ọdịnaya (na-ekwu okwu site na ahụmịhe). Ekwenyesiri m ike na oge ebugo ha na-ewute ahụmịhe onye ọrụ m ọbụlagodi mgbe m na-anọghị na saịtị ha (nke a na-atụ anya oge niile).
Nov 17, 2009 na 3:16 AM
Doug = onye nzuzu. 😐
Nov 17, 2009 na 12:20 AM
Yup ya ezigbo Google na-anwa weghara web - ma ha emeela nke a oge a. Mana dị ka ihe niile, ka ndị mmadụ jiri mee ihe karịa ka ndị mmadụ na-eme mkpesa banyere ya.
Naanị oge ga-agwa… 🙂
Nov 17, 2009 na 1:12 AM
Echere m na anyị na-emeso mma agha ihu abụọ. N’akụkụ, ị nwere ụlọ ọrụ na-eme dị ka nke ọma… ụlọ ọrụ. Ọnụ ego ga-abụ ntụle mgbe niile ma ha ga-eme ihe ọ ga - ewe iji bulie nloghachi ha, na nke a, saịtị ndị nwayọ nwayọ ga - agbacha. N'akụkụ nke ọzọ, Google na-agba mbọ ịbawanye ọrụ ha, na-eme ka ọ rụọ ọrụ nke ọma maka onye ọrụ wee meziwanye ahụmịhe weebụ. Site na webụ na-adịwanye mgbagwoju, Google ga-echedo ngwaahịa ya ma gbanwee maka mgbanwe ga-emetụta ogo ọrụ ya. Ndị ọrụ valuentanetị na-eji oge ha eme ihe bara uru, na nyocha saịtị ndị na-adịghị arụ ọrụ nke ọma na-agbakwunye uru ọrụ Google. Ahụghị m nke a dị ka ihe ọjọọ jọgburu onwe ya. Ime websaịtị ngwa ngwa abụghị usoro dị oke ọnụ, ebe enwere ọtụtụ ụzọ iji bulie ọsọ ọsọ na-ebughị nnukwu ego.
Nov 17, 2009 na 1:36 AM
Echere m na nke a bụ otu n'ime ihe ọjọọ kachasị njọ m hụla Google ka ọ rụọ ogologo oge. Ha nọ n'ọnọdụ iji metụta weebụ maka mma. Ọbụlagodi na ibu ọsọ nke peeji anaghị emetụta ọkwa dị elu, nsonaazụ ya ga-abụ mmatawanye ọsọ nke saịtị gafee ụlọ ọrụ ahụ. Ngwa ngwa ngwa na-abara anyị niile uru.
Mepụta weebụsaịtị nke na-ebu ngwa ngwa esighi ike. N'iburu na web dị ugbu a, nkezi saịtị (ọbụlagodi ọtụtụ ụmụ-nwoke) na-eme ihe jọgburu onwe ya na enwere * tọn * nke mkpụrụ osisi dị ala. Wụnye ngwa mgbakwunye YSlow na GoogleSpeed ​​na Firefox, wee soro ụfọdụ ndụmọdụ ha nyere gị. Ọbụna naanị ịgbaso ole na ole n'ime ha, ị nwere ike ịme ọganihu dị ukwuu n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ saịtị ọ bụla n'ime oge ole na ole.
Ọzọ… na-efu uche. 99% nke ụlọ ọrụ enweghị ego iji bulie saịtị ha maka ọsọ - ha na-anwa ịnọrọ na azụmaahịa. Anaghị m ekwenye na ọsọ dị mkpa… M gbara mbọ na saịtị m iji tinye ọnụ na Amazon iji nweta oge ibe m na-ebu n'okpuru 2 sekọnd. M na-arụ ụka na nke a bụ nhọrọ maka onye ọ bụla. Ọ bụghị!
Nov 17, 2009 na 3:53 AM
Doug, gini bu URL a na saịtị ebe ichoputara ya na Amazon iji nweta oge i ga erughari peeji n’okpuru 2 sekọnd?
Aghọtara m isi ihe ị na-ekwu n'ụzọ zuru oke, mana ekwenyeghị m gị. YSlow na-atụ aro ọtụtụ n'ime njikarịcha nke onye nwere ike ime ka ọ dee HTML. Otu ụlọ ọrụ na-ere n'ịntanetị kwesịrị ịnwe onye nwere ike idezi HTML, ma ọ bụghị ya, ha nwere nnukwu nsogbu karịa na ọ bụghị ogo dị elu na SERPs 🙂
YSlow nwere ọtụtụ akwụkwọ iji jegharịa gị na usoro ahụ, ma enwerekwa akwụkwọ dịka "Ebe nrụọrụ weebụ na-arụ ọrụ dị elu" nke edere ya nke ọma ma gụọ ya ngwa ngwa nke na-enye gị karịa iji ghọta usoro a. Ejiri m otu ehihie gụọ akwụkwọ ahụ otu afọ ma ọ bụ karịa gara aga, ana m akwado onye ọ bụla nke metụrụ weebụsaịtị aka.
Echere m na ihe niile m na-ekwu bụ, egbula oge ikpebi ihe ndị nwe ụlọ ebe nrụọrụ weebụ ga-enwe n'amaghị usoro zuru ezu.
Nov 17, 2009 na 1:02 PM
M kpaliri m niile oyiyi na theming faịlụ ka Amazon S3. Nchikota nke ike ha na ibuputa site na otutu subdomains welata oge ibu m site na 10 sekọnd + rue n'okpuru 2 sekọnd peeji! Re: "Otu ụlọ ọrụ na-ere n'ịntanetị…" - onye ọ bụla na-ere n'onlinentanet ugbu a Dan. Onye ọ bụla nwere ebe nrụọrụ weebụ… ma ọtụtụ anaghị enwe oge ma ọ bụ ihe onwunwe iji mee mgbanwe ndị ahụ.
Nov 16, 2009 na 9:17 PM
Ekwenyeghi m na m huru nke a ka ihe ojoo. Dị ka onye ọrụ nyocha ọchụchọ m chọrọ njikọ ọ bụla m pịa (ma site na nyocha ọchụchọ ma ọ bụ ebe ọ bụla ọzọ) iji kwado ngwa ngwa. Ọ bụrụ na peeji abụọ dị na akụkụ niile nke ọchụchọ ogo algorithm, ọ bụ ihe ezi uche dị na m na nke na-ebu ngwa ngwa ga-adị elu.
Anụchaghị m ajụjụ ọnụ niile ndị Cutts gbara. Ọ na-ekwu n'ezie na oge ibu peeji ga-abụ ihe siri ike na nhazi ọkwa mgbe ahụ mkpa, ikike, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ anyị jirila ugbu a?
Nov 17, 2009 na 2:52 AM
Ọ bụ ihe a ma ama na ngwa ngwa ngwa ngwa jikọtara ọnụego ntụgharị ka mma.
Dị ka onye na-ahụ maka ebe nrụọrụ weebụ, ịchọrọ nke ahụ… Site n'echiche Google, ọ bụ algorithm n'ụkwụ, n'ihi na ibe na-agba ngwa ngwa na-enye ahụmịhe ka mma.
Doug, ị rụrụ ọrụ dị ka SAAS tupu… ma ọ bụrụ na ihe adịghị, ọ na-tara ụta na ngwa ahụ abụghị ihe ndabere. Kedu ihe na-akpasu iwe na ahụmịhe gị mgbe ị ga-echere 10 sekọnd maka ọdịnaya ị ga-ebu mgbe ịchọchara… Echere m na ọ bara uru maka ọkwa peeji iji gbakwunye nke a na esemokwu ma ọ bụghị "ihe ọjọọ" dị ka onye ọ bụla na-ekwu. Ibe akwukwo Google juputara na teknụzụ na bandwidth - mana ọ bụ ngwa ngwa ha na-achọ ka ndị mmadụ wuo peeji na ngwa ndị ọzọ dịka nke a…
Nov 17, 2009 na 3:14 AM
Enweghị esemokwu na ọsọ dị ka ihe kpatara, Dale. Anaghị m ekwenye na igwe nyocha kwesịrị iji ọsọ ọsọ. Ma ọ bụghị peeji nke Google na ngwa ya niile na-ebu ọnụ. Ekwesịrị m idegharị ọtụtụ Google Map API nke KML parser iji mee ka ọ rụọ ọrụ karịa akwụkwọ ndekọ iri na abụọ. Ha ga-dobe folks iji Google Maps ma ọ bụrụ na Yahoo! Maapụ nwere ngwa ngwa ngwa? Echeghị m!
Nov 17, 2009 na 3:12 PM
Ekwenyere m na Christophe. N'ezie, ọtụtụ nde mmadụ na-eji Google eme ihe, yabụ ee, ọ zughi oke, mana ọ rụzuola nnukwu ihe ugbu a. Google choro ego? Onye hell n’ezie taa; Naanị n'ihi na ha 'bụ otu n'ime ụlọ ọrụ kachasị na ụwa pụtara na ha nwere ike, amaghị m, nwee obi ọma ma ghara inwe anyaukwu? Narị afọ nke 21!
Dee 1, 2009 na 1: 21 AM
Mana olee ka ọ ga - esi bụrụ na webpages obere azụmaahịa ga-abụrịrị agbanyeghị? Ọtụtụ obere ụlọ ọrụ ga-enwe weebụsaịtị dị mfe, nke na-ekwesịghị iwe ogologo oge. N'aka nke ọzọ, monoliths dị ka Microsoft nwere nnukwu weebụsaịtị nwere mkpokọta ọdịnaya, nke mere na-ewe ogologo oge iji kwado karịa obere weebụsaịtị azụmahịa gị. Yabụ nnukwu azụmaahịa ga-enwe ọghọm ma a bịa n'ibelata oge ibu peeji.
Echeghị m na enwere nnukwu ihe kpatara Google iji jiri oge peeji dị ka ihe ogo, mana echeghị m na ọ dị njọ. Ọbụlagodi na ọ bụ, ọ ga-emetụta nnukwu azụmaahịa agbanyeghị.